Ramadaan Bilatee ka faa?idayso walaal W/Q:Khadar Jaamac Dirir | Salaan Media
Ramadaan Bilatee ka faa?idayso walaal W/Q:Khadar Jaamac Dirir
Waa bishii uu soo degay qur?aanka Kariimka ah oo hanuun u ah dadka, waxaana laga rabaa inuu soomo qof kasta oo qaangaar ah
Bisha Ramadaan waa bisha ugu mudan uguna fadliga badan bilaha kale, qofka muslimka ah ee mu?minka ah waxay u tahay fursad dahabi ah, wuxuuna dhexda u xidhaa inuu ka faa?ideysto kheyrka ku jira ee uu Alle ku galaday.
Waa bishii uu soo degay qur?aanka Kariimka ah oo hanuun u ah dadka, waxaana laga rabaa inuu soomo qof kasta oo qaangaar ah, haddii aanu xanuunsanayn ama aanu ahayn masaafur dib ka soomi doona, sida ku cad aayadda 185 ee Suuratul-Baqarah.
MARGIN: auto 0in”>Bukhaari wuxuu ka weriyay Abii Hureyra Allaah haka raalli noqdeen in Nebiga (NNKH) uu yidhi ?Markuu Ramadaanku bisho waxaa la furaa albaabbada jannada, albaabbada naxariista iyo albaabbada samada, waxaana la xidhaa albaabbada naarta iyo shayaadiinta?
Ramadaanka waa bisha sadaqada, waa bisha uu qofka mu?minka ah sameeyo cibaado dheeraad ah, maadaama sannadkiiba mar ay timaado, lagana yaabo qofka hadda jooga in aanu sannadka dambe gaadhin. Waa bisha la xidhiidhiyo qaraabada, waxaana ku jira habeen ka kheyr badan kun bilood oo ah beenka Leylatul Qadri”
Tobanka hore ee bisha Ramadaan waa naxariis, tobanka dhexe waa dembi-dhaaf, tobanka ugu dambeeyana waxaa mu?miniinta laga xorreeyaa naarta.
Abii Hureyra (RC) wuxuu Nebiga (CSW) ka weriyay (Qofkii Ramadaanka sooma isagoo Allaah rumeysan oo ajar dalbaya waxaa laga dhaafaa wixii uu hore u galay oo dembi ahaa).
Qof kasta oo muslim ah si uu bishan uga faa?ideysto waa inuu badiyo Cibaadada, Salaadda iyo Qur?aan akhriska, waana inuu ka fogaado wax kasta oo wax u dhimi kara soonkiisa iyo ajirkiisa. Hurdada waxaa kaaga kheyr badan Cibaadada, maalintii ha isku dayin inaad hurdo isku dhaafiso si aadan soonka u dareemin.
Soonku wuxuu gaashaan u yahay naarta, waa dhabbaha lagu tago jannada, qofka sooman wuxuu ka nabadgalaa shahwada, doonista nafta iyo hawadu inay hoggaamiyaan. Jannada waxaa ku dhex yaalla albaab loogu talagalay inay ka galaan dadka saa?imiinta ah oo keliya, sida uu noo caddeynayo xadiis ay soo wada saareen Bukhaari iyo Muslim oo laga weriyay saxaabiga Sahal
Khadar Jamac Dirir khadarjamac12@hotmail.com